Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo La Wareegtay Magaalada Macruuf. – Bogga Calamada.com
Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo La Wareegtay Magaalada Macruuf.
September 30, 2017 5:04 pm Views: 118
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan waxey sheegayaan in ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan weerar culus ay ku qaadeen magaalada Macruuf oo ka tirsan gobalka Qandahaar ee Konfurta dalka Afghanistan.
Weerarkan culus ayeey ciidamada Mujaahidiinta ku daahfureen Camaliyad Istish-haadiyo ah taasi oo uu fuliyay Mujaahid ka tirsan Katiibada Istish-haadiyiinta ee Imaarada kaasi oo lagu magacaabo Xadrat Cali oo deegaan ahaan kasoo jeeda isla magaaladan Macruuf.
Camaliyadda Istish-haadiyada ayaa lala beegsaday dhisamaha xarunta maamulka ee magaalada Macruuf taasi oo inta badan dhulka dhigtay dhismaha xaruntaasi.
Dagaalkan oo muddo kooban socday ayeey ugu dambeyntii ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga kula wareegeen gacan ku heynta magaalada iyagoona Raayada Towxiidka ka taagay saldhiga magaaladaasi.
Inta la xaqiijiyay weerarkan ciidamada Mujaahidiinta ay kula wareegeen gacan ku heynta magaalada Macruuf waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday inka badan Soddon isugu jirta saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka daba dhilifka Kaabul.
Sidoo kale ciidamada Imaarada Islaamiga Afghanistan waxey weerarkan culus ku burburiyeen Sideed gaari oo isugu jirta noocyada kala duwan ee dagaalka kuwaasi oo ay lahaayeen maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Ashraf Gani.
Dhanka kale ciidamada Mujaahidiinta waxey gacanta ku dhigeen hub fara badan oo isugu jira midka culus iyo midka fudud kuwaasi oo goobta dagaalka ay kaga carareen maleeshiyaatka maamulka Kaabul.